Ne AMD tasangana zvakare | Kubva kuLinux
Pandakafunga kuti handikwanise kurova pasi, mushure mekutengesa mudiwa wangu Nvidia, ndakafunga kutengesa wangu anodiwa Intel i5, nekuti paLinux ndaisakwanisa kunyatsotamba chero mutambo mutsva (uchienzaniswa neWindows).
Saka ndakazvinyudza, sevazhinji vashandisi vePhoronix vaive vakurudzira AMD mhinduro kwandiri. Ini murombo ndaifunga kuti chimwe chinhu zvachinja kubva muna Chikumi 2012… asi kwete, hapana, zvachose hapana zvachinja, zvese zvinoramba zvakangofanana.
Ini ndinotanga nekuyedza Ubuntu 13.04 neyangu apu a8 5600k (radeon 7560d), Ndinoona kuti madhiraivhi emahara anononoka, kuti iyo flash yandisingakwanise kuisa pazere skrini nekuti pc inodzikira, uye ndobva ndazama kukwidziridza kernel kuti ive 3.11 (iyo ine simba rine simba manejimendi). Shandisa xorg edgers kuva neyekupedzisira git yevatyairi vemaadhi uye tafura yekupedzisira, kutanga patsva, kumisa manejimendi emagetsi, asi zvese zvinoramba zvakangofanana, iyo yekutanga inononoka kunge emule muna 1999 (dai yanga yatogadzirwa ...), uye zvirinani ngatiregei kutaura nezvezvinyorwa.
Kuedza kuwana runyararo, ini ndinotsiva mutyairi wepachena neakasarudzika, murombo ini, akandiudza! Zvakaipisisa hazvigoni kuenda! Chokwadi madhiragi andakazivisa gore rapfuura akagadziriswa, ini ndinoisa mutyairi wekutengesa uye ndinoona kuti ndave kubvarura mukuberekwazve kwemavhidhiyo uye nekupenya, ndinoenda kuAMDCC, kumisikidza misodzi, ndinoisa bhaisikopo, uye rinoratidza kunge majezi ... , zvese zvinoramba zvakafanana ...
Nekudaro, ini ndinotora laptop yangu ndotanga kutsvaga imwe distro, mushure maawa maviri ndichifunga kuti ndeipi distro yekushandisa, ndisingawani chero iyo yaindigutsa, yeavo vari Kunze kweBhokisi, ndinofunga kurodha pasi archlinux, Ini ndinotanga kuiswa, ini ndaisa KDE, kumirira chii kwin zvaive zvakatsetseka, uye ini ndinoshandisa iyo VioLO repository kuwana iyo yazvino Catalysts.
Ndinoedza, ndinodzima Kwin vsync uye kumutsa iyo AMDCC imwe (iyo Kwin haina kushanda zvachose). Pekupedzisira ndinoedza kuona kupenya ..., kunonoka ... kunonoka, kunyangwe kuchidya zvishoma cpu, zvaionekwa sezvo zvaisapfuura makumi maviri fps fluid (kana ndisina kukanganisa mafirimu akapfurwa pa 20/23 fps), saka unogona kuona mamwe majee ese 24/4 masekondi.
Ndinozviudza ini! Zvakanaka, uku kupenya .., ngatiedzei chimwe chinhu chakajairika, ndinotora VLC, ndinotamba iyo 1080p anime inonzi Break Blade, ini ndinoyedza, uye ndinoona kuti sei xv hapana chiri kufamba mushe, hapana chachinja, zvakaenzana nemajerks mune zvinokurumidza zviitiko, senge munaJune 2012, pandakanga ndichiri kushandisa iyo radeon 4650, saka ndafunga kuyedza kuburitsa gl, Ndinoyedza neMuplayer neVLC, zvese zvine mvura, ndinofambisa makosi ndakananga kubhawa remaminetsi kuti nditarise, uye bhagi rakafanana randakataura muna Ndira 2012, richiripo .., pandinofambisa iyo cursor kubha yeminiti nevhoriyamu , OpenGL inopenga uye inogadzira zvigadzirwa zvese pamusoro pechiso….
Kushivirira kwangu kwakapera uye ikozvino ndiri kunyora kubva Windows, ndichivimba kuti vanamwari vangu munaGumiguru vachandipa mari yekunditengera a NVidia...
Ndokumbirawo usatenge AMD!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Zvimwe » Na AMD takasangana zvakare
Ndezvekuti ndakakuverengera uye zvinogara zvakafanana. Kana iwe uchiziva kuti makadhi aunotenga haashande zvakanaka kwauri paGNU / Linux, nei uchibvisa Windows? Kubasa ndinoshandisa PC iyo Windows yakabva kufekitori uye ini handina kuibvisa. Ini ndakaisa Debian uye ini ndine mbiri bhuti. Sei? Zvakanaka, nekuti pandinenge ndichida kutamba, ndinopinda maWindows uye ndizvozvo. Musoro wapera.
Ini handina Windows yakaiswa kweanenge makore maviri, ndinotamba paLinux chete, mitambo yemuno (yakanaka kwazvo uye yakawanda irikubuda) ... ini handisati ndaona chikonzero nei ndichifanira kushandisa Windows kuita chimwe chinhu izvo zvandinogona kutoita paLinux.
Zvakanaka, kana ikasashanda kwauri, haishande kwauri.
Usandipisa, ndinoziva kuti Pandev ari kuzondivenga nekuda kwemashoko aya, asi mukuremekedza kuvimba kwatinako kune mumwe nemumwe uye nehunhu hwangu hwekutyora mabhora ake:
Imhaka yekuti yakasviba ... XD
Kunyanya, zvinoita fuck
Rusaruro mode ON! 😀
Kutamba mitambo isipo yemuno kuGnu usa
Vavengi vari kunaya mu3… 2… 1… AMD haina kushata, kwete kana iwe uchiishandisa kunze kweLinux.
"Izvo zvinoburitsa madhiraivha ayo, maratidziro ayo, akanaka, akanakaaaaa", inondisvuura, haishande mushe, ndosaka ndakavasiya makore apfuura padanho remifananidzo uye ndinochengeta yangu Nvidia GT430, hachisi chikara asi ini ndinogona kutamba, ndinogona kuona mavhidhiyo, ndinogona kuita zvandinoda ndisingapinde mumatambudziko paLinux
Warevesa @nano, ATI yakanaka kunze kweLinux, nekuti kana ukashandisa Linux uye uine ATI haina kunyatsokuitira zvakanaka, zvinonyadzisa nekuti makadhi ayo emifananidzo muzviitiko zvakawanda anodarika NVIDIA (uye zvinopesana zvinoitikawo).
Ini ndicha chengeta yangu NVIDIA uye munguva pfupi ndichave neIntel HD Graphics pane iyo Core i3 😀
Rukoko 8 🙂
Iwe unonyatsofunga kuti iri dura 8. Ini ndinopokana nazvo, yakawanda chaizvo.
Ndiwo matrolls akafanana akaita kuti ndiwire mu phoronix uyezve sezvo apu yaive pa80 euros, kupihwa kubva amazon ahahhaa kwaive kusingadzoreki xD.
Amd inosunungura ayo maficha ohh hongu 8D
Matambudziko ako anoshamisa kwazvo, ini ndiri kurota kwebhuku rekunyorera ine apu E450 mandiri kumhanyisa Debian kuyedza Xfce nemadhiraivha eimba uye ini handimiriri chero dambudziko raunoratidza, kunze kwekuratidzira kunonoka mu flash pa720p, asi ihwo hupfu hweimwe saga. Zvinoitika kwandiri kuti chingave chiri chinhu cheKDE "kuenderana".
@JackassBQ ndiyo kesi yako, asi "dambudziko" rekunonoka kupenya kuratidza mu720d pamwe nemidziyo yeATI madhiraivhu aunayo, haina chikonzero nei, uye mhinduro iri nyore, neNVIDIA ichishandisa newuau kana madhiraivha eizvo hazviitike uye Ndiro dambudziko hombe iro ATI / AMD rinaro nevatyairi varo uye nehunhu hwavo husina kunaka, izvo pakupedzisira zvinoita kuti vave sarudzo yakasarudzika, yakaipa kwazvo kana muchivashandisa neGNU / Linux.
Ini ndinokuvimbisa kuti hazvisi sezvaunotaura, ini ndaita bvunzo neIntel uye nvidia ine Hardware yakafanana neyangu uye matambudziko neflash akafanana. Wese munhu anoziva kuti kupenya paGNU / Linux kunoyamwa, ndiro dambudziko.
Zvakanaka mune yangu kesi ini ndinogona kuona kupenya mu720p uye 1080p ine nouveau isina matambudziko kubva kuYouTube, saka zvinoita kwandiri kuti iwe unowedzeredza. Panyaya yeIntel, iyo HD Graphics yakanaka uye ini handina matambudziko navo, uye ndinovimba handina pairi pc yangu nyowani.
nouveau hwangu hunopisa zvikuru pakadhi… saka ndinofanira kushandisa dzvamene
Shamwari, Computer yega yega yakasiyana neimwe, kunyangwe iri 2 yakafanana newareware mune zvakatemwa 😉 kubva pane zvakaitika kwandiri ndinokuudza, ndapedza makore ndichigadzirisa nekuona makomputa, ndakatora mhedziso yangu uye iyo dura 8 inoshandiswa zvakanyanya uye kunze fashoni, pane amd modhi mune Graphics ayo anotonhorera mune linux sevamwe ausingaite kutanga kana kunamatira xD, parizvino ndiyo chete kambani yandakaona inoisa yavo yemahara giraidhi madhiraivha ndeayo eIntel, kunyangwe pazove pasina kushaikwa. yemhando dzavanoda kutanga Hondo yemoto, ngatitaurei zvinhu sezvazviri, vese amd uye nvidia havakwanisi kuburitsa yavo kodhi kodhi kuti vaiite mu linux, mitsara yacho ishoma uye chinhu chinonakidza chekuti nguva painopfuura amd inopfuura ivo kunhaka, uye hapana mumwe wevaviri anokwanisa kuita chimwe chinhu chakanaka pavari, chimwe chinhu ndechekudzosera mainjiniya madhiraivho uye hadware uye uwane unofficial, asi ane hunhu mutyairi: /
Mufaro! Use (Shandisa neIntel kunyangwe iwe usingaifarire zvakanyanya, ndiyo chete sarudzo inosarudzika kusvikira wagadzirira kuita basa rako nemazvo kwete hafu ...)
chucha xD yaive yemashoko @jackass xd
Zvizere unobvumirana. Vazhinji vanodavira kuti vatyairi vane zvivakwa, chaizvo nekuda kwechikonzero ichocho, vari nani, nepo ivo zvese zvavanoita kudzikamisa komputa. Ini handina kumbobvira ndaita matambudziko neyakare Ubuntu, uye pavakatanga kuoneka (vhezheni 12) ini ndakachinja kuita LMDE uye nyaya yacho yakagadziriswa.
Ndinokuvimbisa kuti ndakaedza ne nvidia gt630 uye neIntel hd4000, uye 0 matambudziko ane flash, neiyo Intel dambudziko roga nderekuti munzvimbo yechipiri, yaibvaruka kana kwete, asi nezvayo zviri zviviri zvainyorova.
Saka pamwe ingangoita 8 yekukanganisa yangu kusakwanisa kushandisa Intel kana nvidia mifananidzo nenzira yakanaka, uye nhete 8 yako isingakwanise kushandisa AMD sezvainofanirwa 😀
Zvakanaka zvaunofunga mwanakomana xDDDD.
Kana zvichikufadza: ok
Ini ndinofunga urikukwenya zvakanyanya ne layer 8, pakadaro ndingangokuudza kuti ufunge zvaunoda.
Zvakanaka, pavanodzidza kumisikidza yavo Hardware zvakanaka, isu tichataura 😉
Zvakanaka, tichakuzivisa iwe, kukwazisa uye rombo rakanaka.
Wakatondipa chikonzero chekugadzirisa matambudziko ako, kuti ungagone kuzviwana sei. Zvido.
Ine i3 yechizvarwa chekutanga uye neIntel HD ini zvakare ndine matambudziko neflash, kunyanya mune yakazara skrini.
PS: Hazvina basa kuti utsvinudze, yega yega yakave nezviitiko zvayo neyavo Hardware uye ndiani anoziva kana dambudziko iri rimwe kana iro Hardware pachayo.
HTML5 uye mutambo wapera
Thanks nezano. Shanje idzo dzakasviba nemutyairi wavo wemahara dzinoshanda nemazvo uye dzinotarisira zvakanaka mutyairi wavo ane kodzero
Zvinoenderana neNVIDIA, ndine chembere (8400 GS) uye iri mushe, iine tembiricha yakaderera ingangoita 48ºC uye 60ºC pasimba rakazara, ini ndinotamba chimwe chinhu kana chimwe, uye munguva pfupi iyo PuerVideo HD injini inozokwanisa kushandiswa kushandisa newu, kunyangwe hazvo Izvo hazvizofananidzwe nemubati mutyairi, zvinhu zvinobhururuka ipapo.
Ndine AMD A10-5800K APU ine Radeon (tm) HD Graphics 7660D uye inoshanda mushe ... tarisa zvakanaka uye tarisa izvo zvisipo .. semuenzaniso: une mbiri chanel yakaitwa? ine gondohwe rakawanda sei? nezvimwewo
ehe chaunoda iwe ndechekuti linux ive chaiyo kune windows saka dambudziko riri mupfungwa dzako uye kwete mune gnulinux
Kuda chimwe chinhu chatakaisa mari yakanaka kuti ishande zvakanaka kana, zvirinani, zvine mwero zvakanaka harisi dambudziko repfungwa, ingori pfungwa yakachena.
Pindura kune nop
ram 1333 mhz ddr3, zvese zvakaitwa, ini ndinoshandisa 512 mb yekurangarira iyo apu, hausi mubvunzo wekugadzirisa, inyaya imwecheteyo senguva dzose, vatyairi veamd vakashata kwazvo muna 2d ..., nezuro ndanga ndichikurukura Iye zvino nemutyairi 13.8 akabuda nezuro mimwe mitambo haina kunyanya kuipa, iya yevhavha, asi neiyo 13.7 yandaive nayo nezuro, zvinotyisa…. /. Uye ndinoziva iyi haisi nyaya isinganzwisisike, nekuti nyaya yeopengl kuburitsa ne vlc uye mplayer yakanga yatotaurwa kare painoshandisa radeon 4650 uye ichiripo. Kune zvakawanda inri vhiki ino ndichaita vhidhiyo inoratidza dambudziko.
Zve elav, sezvo ini ndanga ndisiri kuzotenga amd, dai ndaida mari uye Intel i3 haisi kungononoka se cpu, asi zvakare ine anenge ese Intel hd2500 / 3000 mifananidzo isingakodzere kutamba pamahwindo.
yeAPUs RAM ndangariro dzinodiwa kakawanda, zvinoita kuti pc irambe zvirinani, chimwe chinhu kubva muna 1866 kana 2000+
pamwe dambudziko riri kuve rakabatanidzwa girafu reAPU, unogona zvakare kushandisa imwe FX ine discrete mifananidzo HD 7000 nhevedzano yepakati-pasi renji
Pindura kuna frk7z
Ndiyo gondobwe rimwe chete randakashandisa Intel hd4000, hongu kana ukaisa inokurumidza unoona mumwe mutsauko, asi izvo zvinokonzeresa mutyairi haafanire kunge aine mega bugs.
Zvakanaka, Intel ine yakakwira ye1600mhz yeiyo RAM (mune processor), mu AMD iri kusvika 1866mhz inoita kwandiri, uye ini ndaona neOC inopfuura 2000, asi izvo zviri kunyanya kune maAPU sezvo ivo vachimhanya zvirinani vane yakawanda frequency mu iyo RAM ndosaka yakati xd.
Chinyorwa chinonakidza. Ini handitambe mitambo, zvirinani kwete iwo akaomesesa ane akakwirira Hardware zvinodiwa. Kune zvese zvandinoshandisa Linux uye mukuedzwa kwangu kweDebian 64 XFCE4 ine Intel G31 / 33 ine mwero kwazvo, ndine yakakwana.
Ndiri kuzochinja firefox yekuwedzera kune mushandisi mumiririri ..
MuArchlinux, vatyairi veATI varidzi ndivo vakaipisisa pasirese, uye zvakatonyanya kana iwe ukashandisa iwo eviolo, zviri nani kurodha pasi uye kurimisa neruoko (kana iwe uchida kushandisa zvine simba)
Ini ndinoshandisa ATI HD3000, madhiraivhi emahara ndiwo akanakisa eaya apus enhaka, asi iwe unofanirwa kuimisa kuti uwane zvakazara mairi, ndinokurudzira kuti uverenge archlinux radeon wiki https://wiki.archlinux.org/index.php/Radeon#Performance_tuning
Uye zvakare rangarira kuti Archlinux haiuyi nechinhu chero chipi zvacho nekukanganisa, kunyangwe iwo ese graphic ekumhanyisa maraibhurari.
lib32-fontconfig lib32-libxcursor lib32-libxrandr lib32-libxdamage lib32-libxi lib32-gettext lib32-glu lib32-libsm libxi gettext glu libsm desktop-file-utils lib32-giflib libpng lib32-libpng gnutls lib32-gnutl . tafura lib32-tafura
Uye nenzira imwecheteyo isa ese maraibhurari akanyorwa pano https://wiki.archlinux.org/index.php/Steam/Game-specific_troubleshooting#Dependencies
Zvemakadhi enhaka! Iwo madhiraivhi emahara ndiwo akanakisa sezvo iwo akapwanywa, asi kubva pa5xxx akateedzana zvichienda mberi, iwo haana kunyatso kubwinyiswa zvakadaro mhhh ...
Ndakatarisa kakawanda munyama dzangu ... AMD yakanaka maererano nemutengo, asi mukuita (uye zvimwe zvakawanda muLinux) haina kubhadhara, nezvakawanda. Sezvandambotaura mune yangu yapfuura posvo, haichisiri iyo nyaya yekuita mumitambo (iri kuvandudzwa), asi matambudziko nedesktop mune zvese.
Ini ndakawanazve yangu Nvidia 9800GT mazuva mashoma apfuura, uye mutsauko mukuita unonyatso kuoneka, zvirinani nevatyairi vezvivakwa. Iri kadhi rinogona kuve nemutengo wakanaka kwazvo wechipiri ruoko, tichifunga mashandiro aanopa. Ini ndakaisa rimwe zuva chinongedzo kubva kuPhoronix nemamwe akanakisa Linux / windows mabhenji eNvidias kubva 98'00GTX kumusoro.
Nezve rekodhi, iyo Catalyst yeLinux yakavandudza zvakanyanya. Makore mashoma apfuura, ndichishandisa iyo HD4330 yelaptop yangu muOpenSuse / Kde uye Ubuntu yaive kirisitu… naDebian zvaive nani zvishoma.
Ivo vakavandudza zvakanyanya zvine chekuita neiyo 11.xx dzakateedzana asi nekuremekedza iyo 12.6 yaive yekupedzisira iyo yakatsigira radeon 4650 .., hazvo kwete ... havana kuita hanya pandakamhan'ara madhiragi! Ini ndinofunga kuti hushoma hunofanirwa kuitwa nekambani senge amd kuita kuti vatyairi vashande zvakanaka ne kwin kana compiz, uye kuti xv haifambe senge hafu inononoka kana ichienzaniswa nvidia kana intel.
Ini ndinofunga dambudziko raive pachena kune vashandisi makore mashoma apfuura, asi ikozvino mitambo ine mwero zvine simba yasvika, izvo isu tese tanga tichiziva kutanga kubuda: kuti vatyairi veATI veLinux 'shit'. Ini ndinofunga kuti mumakore mashoma izvi zvichavandudza ... nezvose ATI naNvidia. Asi kwechinguvana, isu vedu vane "yekare" mifananidzo yakajeka pamusoro payo. 😀
Nezuro chaiye ndakave neruzivo rwakadai neangu HD5670, iyo zvechokwadi inoshanda zvakanaka paWindows. Mushure mekuchinja hard drive ini ndakasarudza kuisa zvese kubva pakutanga, uye nezuro yaive Linux Mint 15 Cinnamon.
- Ingoisirwa iyo inondipa madhiraivha emahara, iine rimwe dambudziko kuti ndinyatsoona resolution asi ini ndinoigadzirisa nekukurumidza.
- Ini ndinoisa 'fglrx' uye mushure mekutangazve Cinnamon peta uye inopinda munzira yefa kana chero zvazvinodaidzwa.
- Ini ndinoisa 'fglrx-inogadziridza', inova ichangoburwa, uye zvimwe zvakafanana (uyu mutsara unonzwika wandinoziva).
Ndasiya vatyairi vakasununguka, izvo zvaiita senge zvisina kumira mushe kusvikira ndaisa mitambo yakati wandei. Ini ndakangoedza lincity-ng uye ndisina kana kufamba nemamenu ayo ini ndinosvika kudesktop.
Mangwana ndichaenderera mberi nekuyedza.
Zvinoshamisa kuti, palaptop iyi ine HD7470 inofamba zvakanaka ne 'fglrx-inogadziridza' (kunyangwe ndichifunga kuti ndinorangarira chimwe chinhu nemavhidhiyo akazara), asi pano ini ndinoshandisa Mate, iyo isingade kukura kweCinnamon uye mamwe madhesiki ane hwakawanda hwazvino hwaro.
wakamboedza gungwa apu a8 5600k?
usakanda mapfumo pasi ...
Nebhokisi reasrock, ini ndakagadzirisa iyo Xboost, saka ini ndinoona kuti xD ​​ndeye oceada ..., ikozvino ndichaedza neiyo ubuntu 13.10 iso uyezve nedistro inoshandisa imwe nharaunda isina mhedzisiro, senge crunchbang, kusvika tsvuku ngowani XD
Chenjerera! AMD ivo pachavo vanoyambira kuti ivo vanongotsigira Ubuntu 12.04 ... kunyangwe ini ndichiri kuita mutserendende uye ndichinongedzera kuCatalyst Legacy, inova iyo yandinayo yeiyo HD4330.
Parizvino ndiri kuyedza kubuntu 13.10 uye zvinoita kunge zvakakwana, zvese kupenya hazvina kubvarura uye zvine mvura sezvo mplayer anogona kushandisa opengl nenzira kwayo uye pasina matambudziko, sezvo muna 2d zvese zviri .., ikozvino kunetsekana kwangu tembiricha. ., lm- sensors haandiudze kuti ane madhigirii mangani andinawo.
Kusvika wazviita. Ndiko kukosha kwekunetesa nzira dzese usati wamira nekuti hongu. Kwaziwai, ndinokukwazisai 😉
Ini ndakazviwana hafu, nekuti ese ma1 kana maviri maawa, segpu inokiya kumusoro uye iyo skrini inodzima kwemasekonzi mashanu uyezve inotungazve.
Kune ma distros anozvibata kunge tsvina (ini handisi kuti ndizvo, hazvo, chokwadi hongu, chete debian uye openuse uye mint kuzvibata nenzira yandinoda: P)
Ndokumbira uvandudze chinyorwa chako / tantrum
Komputa yangu yakaipa kupfuura yako
AMD X3 450 + ATI HD 4250 pa720p paAUSUS ingangoita 24 ″ 1080p
Uye neManjaro uye mahara madhiraivha zvese zvinoshanda - kunze kweBlender yandisingashandise kubvira ATI ichishandisa OPENcl - yakavhurika - uye kwete CUDA - yakavharwa -
Ini handidi zvimwe uye muzuva rayo mhando / mutengo muyero ndiyo yaive yakanakisa
APU haisi yekuita zvishamiso, ndeyekuti ive nechengetedzo shoma
Zvinondinetsa ini kusiiwa kwevatongi vanoita zvigadzirwa zvese
MuGPUs iyo ATI - NVIDIA yemhando yemutengo yakaenzana uye vanodzora neCUDA vane mukana pamusoro peNvidia mhando dzemutengo uye mashandiro akafanana neaya eATI, asi muAPU fananidzo inofanira kuitwa neIntel mumutengo uye mashandiro uye mumutengo yeiyo CPU inokunda ATI, uye mumutengo uye mashandiro eGPU futi.
Isa iyo Intel imwe nzira neIntel mifananidzo yemutengo mumwe chete kuti uenzanise, kwete imwe fungidziro yekubatanidza Intel + yakachipa yakasanganiswa nvidia iyo isipo.
Laptop yangu ine emahara madhiraivha uye iyo radeon 4650, inosvika pamadhigirii makumi mapfumbamwe, saka ini handironge kugadzirisa chero chinhu. Chero zvazvingaitika ini ndicharatidza mamiriro asina musoro madhiraivha ekadhi rangu arimo. Asi kuti pamwe mangwana.
Compa mumushuwire rombo rakanaka, ndiri kufunga kuti ane huroyi / kumutuka haha ​​-Kungoseka chete.
Ndanga ndiine amd apu A8-3850 kwenguva yakati zvino, uye senge iwe, mutengo wakabata ziso rangu zvachose. Ndakaedza akawanda madhiri uye ndikachinja, asi kwete nekuda kwekugadzikana, asi nekuda kwehunhu hwangu, asi iwo matambudziko ekusagadzikana haaitike kwandiri, asi mashandiro haana kufanana neWindows akatenderedza mitambo, iwo anomhanya newaini zvakanyanya zvakaipa. Kunze kwaizvozvo, Chakra yangu inopfuura kugadzikana nevatyairi vemahara; Ini ndinongosimbisa kuti kupenya muFirefox chinhu chinotyisa icho muChromium hachina kufanana, chinoyevedza.
Ini parizvino ndine dualboot, uye windows yemitambo. Asi ini ndinoziva kuti zvakavanzika madhiraivha eamd ari kure nzira kubva kuve padanho revaya ve nvidia.
Pindura kuna Wayne7
Yako apu yakura kupfuura yangu, inoshandisa hd65xxd iri chaizvo yakaenzana ne5xxx dzakateedzana saka ine rutsigiro rwuri nani :). Zvangu 2d nyaya zvapera nekubuntu 13.10… rega ndiite bvunzo shoma shoma.
MUCHAKRA ZVESE ZVAKAITIKA
Ndosaka iwe uchishandisa windows (maximum trolling).
Izvo zviri nyore (kwandiri) ini handisi mutambi, kana ndikatamba ndinozviita neavo vanouya nekutadza muhurongwa (kana zvikauya nazvo), hapana chakafanana nekupedza nguva uchitamba Sudoku kana Mahjong (iyo yekupedzisira ndakasangana / ndakadzidza Kutenda kune iyo yakauya muUbuntu) ndichigadzirisa iyo system kana kurodha pasi chinhu.
Uye kana ndikatamba ndinozviita mukutamba 2, hapana chakafanana nedambudziko rakanaka rePES neshamwari, ichiperekedzwa nemapakeji mashoma edoro, kunyangwe ini ndinenge ndichirasikirwa nguva dzose.
Iyo PS2 haina mutambo wakanakisa pasirese: Yakakomba Sam xDDD
MuLinux mutambo uyu hyper mega isina kugadziridzwa, zvinonyadzisa: /
Ndave ndichishandisa ati kwemakore gumi ikozvino ndine atu 10hd ine madhiian uye anezvinotyaira uye handina kana dambudziko kana flash kana mavhidhiyo, kutamba ipapo kana ndikashandisa windows, kunze kwekunge ndichiridza FTL yandinoda. muchidimbu, munhu wese anotaura nezve zvavari kuita pachiratidziro.
Pindura kuna Janus981
sekutaura kwandakaita AMD RADEON Hardware iri nani pane Nvidia asi NVIDIA ine software iri nani pane AMD. Ini ndiri fan we AMD asi kusvikira chimwe chinhu chakanaka chabuda mumadhiraivha muLinux ndichaenderera mberi ndichishandisa Nvidia kuti kana ichishanda mushe muGNU / LINUX
Ndinoziva kuti handisi ini ndoga mushandisi anofara ane AMD. Ini handipe, ini handitambe, asi ini ndinoshandisa gnome shell, (kde inondinetsa), ndinotarisa mavhidhiyo mafirimu, mabhaisikopo (asingasvike 720p) ese aine mutyairi wepachena.
Ini ndinongofanira kuti: Rarama kwenguva refu AMD
Ini handina matambudziko neayo epamutemo, iyo inokonzeresa repo zvigamba zviri kufamba mushe, chinhu choga chandinosuwa kugona kusarudza chaiyo yekumhanyisa, apu uye yakatsaurirwa, chimwe chinhu chinobira bhatiri diki, asi hachisi chikuru, mu kuhwina 8 haigone kana 🙁
Tsika? Usashandise zvigadzirwa zve AMD zvemifananidzo kana iwe uchida kunakidzwa neGNU / Linux, nguva
Zvirokwazvo kwete, iwe wakanganisa, ini ndine AMD processor uye vhidhiyo, ini ndaishandisa chakra uye zvese zvakakwana ... MuUbuntu zvinotyisa.
Iko hakuna chikonzero nei ini ndine PC yangu ine 100% Intel chipset.
Dambudziko neelchen nderekuti haugone kutamba chero chinhu zvakatsetseka ... regai tione kana vachipa kuvandudzwa kwetafura nekuti zvinonyadzisa kuti kunyangwe iyo dota yaive isingasviki makumi maviri fps ...
Off Nhaurwa: Iyo avatar inondiyeuchidza nezvemudzidzisi akatsauka kubva kuhupenyu hwemitambo Daria.
Damn, ini handina kumbobvira ndotenda kuti kuenderana (kana kusapindirana!) Ne AMD yaive odyssey yakadaro
@ pandev92 Kwaive kupi fanboyism?
Hama zviripachena kuti urikushandisa apu iyo apus inosanganisa magirafu necu iyo apu haina kushata asi, gehena isu tese tinoziva kuti AMD Linux madhiraivha ishit, ese akasununguka uye ane chivakwa.
Yangu Hardware AMD Phenom II X4 965BE 3.4GHZ
Asus mamaboardboard M5A97 chipset
Inotonhora stock brand inotonhorera tenzi ine 2 mapaipi epombi
Zviripachena ini ndinotoshinga kuvimbisa kuti pc yako yakaenzana nechizvarwa chekutanga Intel musimboti i3 ine frequency isina kukwira kupfuura 2GHz
Tarisa uone ichi Bechmark http://cpuboss.com/cpus/AMD-Phenom-II-X4-965-vs-AMD-A8-5600K
Ungaona sei kuti cpu yangu inodyiwa pa5600k, usanyepedzera kunge uine budiriro huru neiyo apu, ndinobvumirana newe amd haishande zvakajeka muLinux kanenge muUbuntu uye HAPANA zvigadzirwa.
Zvinoitika kuti ini ndaive nepear os 7 ndakaisa iyo yechokwadi mutyairi inokurudzirwa necanonical mumasoftware zvinyorwa uye chinhu chega chandinacho kupwanya mapakeji, ndaifanira kuisazve.
Pakutanga ini ndaishandisa Chakra nemadriver ayo aanoisa pamwe nekumisikidza nemadriver, zvese zvaive zvakakwana pasina matambudziko uye pamwe amd haina kupfura akawanda fps asi ini handina basa neakawanda fps.
Ini handisi AMD fanboy ini ndinoshandisa chete nekuti ini ndinofarira kutamba kwavo kwakanaka, unoziva Nvidia aive AMD asi CEO Jen-Hsun Huang aigona kutengesa nvidia kana akaramba ari muamd sa CEO we brand yake, ye Intel kana kutaura mumawindows is marara.
Ini ndinobvuma, ndinobvuma uye ndinopa kutenda kuti mu CPU Intel ndimambo wemadzimambo kunyangwe AMD iine 8 yemuno cores uye 4.0ghz stock ichiri kushandisa 32nm intel ichakunda.
Chimwe chokwadi: Dell, HP, Toshiba nevamwe vagadziri vanogashira mitengo yekutsinhana nekutenga zvishoma kana chinhu ne AMD, saka kambani yakamhan'ara kumatare eIntegred.
Ini ndinofunga musoro wako unopisa, asi ndakanganisa ndiStallman. Pese pandinogutsikana kuti RMS Inorarama muna 1990 uye kwete muna 2013, zvese zvinoita kunge zvisirizvo,
"Usatenge ATI, muvengi werusununguko rwako." Muvengi wemabhora angu, pamwe haadi chero chinhu nekuda kwake, kune rusununguko, asi nekuda kwake zvakare kuti muLinux mune mafeni akawanda , kutaura kuti ivo havatenge AMD, zvingaite sekutaura kuti Ubuntu shit, nekuti, ini handifarire zano reCanonical rekuzvizivisa nekuita zvido zvemunharaunda uye kuva semi-proprietary .
Ini handisi kukubata zvakaipa asi kana iwe uchida kundisarudzira kana hure zviite, zviite, iwe uri mukati mekodzero yako yekutaura zvaunofunga, ndinokukoka kuti uongorore usati wanyora zvinhu zvisiri zvechokwadi.
Muchidimbu, ari kutaura chokwadi, sePRISM, vatendeuka uye vabvumirana neRMS. Kana vari vatyairi, ini ndinofunga zvakanyanyisa kuti kuzvitonga kugadzirise matambudziko uye kusava nemanzwiro ekuva nyajambwa wemubhadhara.
Iyo RMS ndeyechokwadi, iye ari, asi mune dzakawanda nguva, anowanzo kuve anopokana maererano nemazwi ake.
Ini ndinoshandisa Debian saka handikwanise kujairira Ubuntu's yakashata package system (kubva kuUbuntu, ndati, kwete kubva kune ayo mabudiro akaita Kubuntu kana Xubuntu, ayo akanaka kwazvo), uye ini ndinoshandisa Flash Player kutarisa mavhidhiyo angu, Skype kuti ndikwanise kuita hurukuro dzevhidhiyo uye Opera kuwiriranisa yangu inodiwa ye smartphone.
Muchokwadi, Ubuntu hunondibata uye hunondisunga, hwakanyanya kusimba, hunobhururuka zviri nyore kupfuura windows 98 uye hunokwira izvo chete.
Ini ndinofunga kushandisa zvinhu zvekupokana senge chiutsi kana macodecs hakusi kutengesa rusununguko sezvo ini ndisingazive kana ndichigona kushandisa flash mune trisquel ini handina kuchinja asi kwandiri chinhu chakanakisa ndiChakra, manjaro uye Opensuse,
Kusvika pane zvinobva kuubuntu ini ndinoti HAPANA KUKOSHA Hapana
Kubuntu uye mint zvakafanana nemusiyano wekuti Mint yakanyanya kutarisana nevashandisi vemultimedia ine zvimwe zvakadai sevlc gimp uye minitube uye zvishandiso zveminti senge mint backup, mint kuisa mint, sourses nezvimwe.
Saka akawanda mabudiro eUbuntu ane akasiyana mamiriro, akasiyana screensavers uye zvirongwa kuburikidza apt kuti mune akawanda distros anoshandisa zvakafanana zvirongwa….
Dai ubuntu yanga isina kubviswa pane zvinonaka zvayo, zvingave zviri nyore kupa DVD inosanganisira Unity, gnome Xfce, LXDE uye kde asi nekupinda kwemir kwakauya kuzokanganisa hukama pakati pekunaka kwayo.
Zvimwe chete neminti inopa dvd ne KDE, CINNAMON, mate uye Xfce
uye mint debian nesinamoni uye mate, chaizvo sezvinoita Opensuse, izvi zvinogona kuita kuti vashanduri nevashandisi vatsva vashande, nokudaro vachidzivirira kuvhiringidzika uye kufunga kuti kubatana kwehumwe nehunhu kwakafanana, ivo vanounza iyo imwechete software ine mutsauko we graphical nharaunda. .
Zvakanaka imwe nzira yekuita Gnome neXCFE kuitira kuti kana iwe uchida kushandisa XFCE iwe unogona kuichinja nekukanya kana kubatanidza mamenu uye maturusi, mune iyo LXDE neRazor QT iko kusanganiswa kwekodhi yakarongeka kubva pakutanga.
Izvi zvaizorerutsa kuti pakanga paine kupatsanurwa kudiki kana kujoina semuenzaniso
PEAR OS + ELEMENTARY OS Uye DIPEEN LINUX kuti ese matatu akatarisana nekutevedzera mac os uye vese vatatu vane yavo yega software yakazvimiririra negnome asi pear os uye dipeen vanoshandisa gnome sehwaro. Zvino kubva kuElementary handizive kana ichishandisawo gnome senheyo.
Nezve RMS, haifarire chero chinhu uye pfungwa dzayo yekuva akasununguka zvakanyanya dzinozvidzivirira kubva mukupa dzimwe nzira dziri nani dzinogona kuve dzakasununguka zvachose asi zvine mhando.
Sekuziva kwangu Gnome inobhadharwa ne redhat uye ine hwaro hwayo hwaro, mukati mawo zvinoita senge kwandiri kuti gnome inoonekwa sechikamu cheGNU, asi kunyatso kukwikwidza neazvino ui kana Aqua ye mac ivo vanofanirwa kubvisa software isingachashandi uye kugadzirisa iyo mabasa echirongwa pamwe ne graphic mhando. KDE inoita sedzakanaka kwandiri kunyangwe iri mifananidzo inodyiwa mune iyo ui modhi uye mac uye gnome iri mamaira kumashure graphical uye mune mashandiro ku KDE.
Wakatadza kwazvo, iyo i3 inodya cpu simba kune amd, zvishoma hapana chimwe chinhu, asi mumifananidzo, iri kure kwazvo, ndinokudenha kuti utambe nhandare yehondo pa3p neiyo i1080 isina rimwe girafu rakazvitsaurira kana uchikwanisa kuzviita. (chingoona mitambo yemitambo paYouTube).
Nenzira, ndinoda kunongedzera kuti iyo apu inodhura makumi mashanu euros pane yako phenom ... uye inorasikirwa zvishoma ..., ini handioni iyi inoshamisa! sezvo nezvakanaka unofanira kutenga graphic yakatsaurirwa, iwe unobhadhara zvakanyanya, uye pakupedzisira unofanira zvakare kutenga graphic, uye zvirinani kuti iwe utenge 50 euro imwe…, unenge uine fps imwechete seapu.
Zvakanaka iwe haudi hazvo mifananidzo yakatsaurwa kana iwe uchikwanisa kumhanya mutambo uine 4250 kana yepamusoro yakasanganiswa chipset ine 1024mb kana zvimwe.
Pamwe sekutaura kwangu haisi graphical kukanganisa asi imwe iyo vese Amd naNvidia vasina basa. Chinhu chega chakanaka mune linux ndeichi.
Nezve izvo zvaunotaura, apu iri nani pane chero Intel HD, pamwe iyo inoyerwa ndeye Intel HD 5000
Shandisa emahara linux madhiraivha, iwo ekuzvimiririra kubva kune ese nvidia uye amd ndeemhando dzisina basa kunze kweOpensuse neChakra….
Sezvineiwo, muUbuntu, vatyairi veATI / AMD vanoshanda zvine mutsindo, asi ini handina kuyedza mumitambo.
Iyo 13.15 uye 13.20 inoita kunge isiri, kubva pane zvandanga ndichiverenga, kunyanya mumaapus ivo vanokonzeresa kuwanda kwakawanda mumitambo uye kuyeuka kwendangariro! xD
Zvirinani kushandisa akasununguka, aine kuruboshwe 4 akafa 2 mune zvese zvepakati uye mamwe maitiro akakwirira, ndinofunga ndine yakasimba 30 fps (1600 x900).
Zvakanaka ndiri kuita zvakanakisa neADD, kubuntu 12.10 pamwe neyekudyira mutyairi, ndinotarisa mafirimu, ndinotamba pane steam (Counter-strike source, uye hafu yeupenyu 2 deathmatch) uye zvese zvakanaka.
Yangu cpu: AMD Phenom II x6 1055t
Zvinoita sekunge iwo chete eiyo 7xxx XD akateedzana ndiwo achaenda kubhin, mukubuntu proprietary driver kana ndikashandisa openg sevlc kuburitsa zvinondipa akati wandei matambudziko, uye zvinonzi zvinopfuura mumwe mushandisi mu phoronix.
Pekupedzisira ndinoita zvakanaka kubuntu 13.10 nemutyairi wepachena uye netafura yekupedzisira ..., ndakabudirira neflash uye mavhidhiyo akaipisisa ndaisakwanisa kumisa uvd ..., ndinofanira kuziva nzira yekunyora tafura uye kugadzira yakakosha madhiri ne vdpau yakaitwa.
Ini handina matambudziko, ini ndinoshandisa amd uye inoshanda kwazvo, zvirokwazvo inofanirwa kuve iwo apu kana ivo vanouya mune imwe chete cpu inofanirwa kutora nguva, kana tikasvika seizvi pane zvinhu zvinoverengeka zvisingashande.
Ini ndinogona kutamba hafu yeupenyu 2 pasina dambudziko, trine, bastion kana mimwe mitambo. Ini pachangu, kupenya kwakandinakira, kungave kuri 720 kana 1080p.
Zvakanaka ndinoshandisa manjaro.
PowerColor Radeon HD 7850 2GB 256-ikakuruma GDDR5
16 GB Gamu
Uye ini ndinotamba dota 2, nhare yetimu, cs 1.6 steam uye inondikodzera, ndine madhiraivhi emahara uye handina dambudziko navo, ini handisati ndaona kukanganisa mune yangu Flash player uye ndinoona mafirimu mune bhuruu.ray pasina kusvetuka .
iwe hauna mbiri chanel yakavhurwa. kuimisikidza iwe unoda maviri emakonduru mamodule angangoita 2 uye iwe unoimisikidza mune bios. uye mutsauko ndewekuti unowedzera mashandiro neanopfuura makumi mashanu muzana
imwe yesimba reaya apu amd ndeyekuti mbiri chanel. ine module imwe chete haina kumisikidzwa
kungoisa Xboost haina kukwana, iwe unofanirwa kunyatso nyanza ...
Chingave chinotonhorera dzidziso yemabatiro emahombekombe apu amd ... chero munhu anoziva?
Pandev gara mumahwindo, nekuti zvinoshamisa kuti hapana kana chinhu chinoshanda kwauri, kana mu linux kana muOSx. (usazvitore nenzira isiri iyo eh, irwo joko)
Zvingangodaro, pandev haibvumirane neUNIX uye zvigadzirwa zvayo.
Ini handingoenderane chete nemagarca eliotime3000 madhiraivha, ini ndiri kunyanyo kubvunza: =) uye zvinosuwisa kuti ndiyo chete inosangana nezvandinoda nvidia.
zvakanaka ndinofanira kutaura kuti zvirinani kwandiri, ndinoita zvakanaka nemadhiraivha eimba, ndinoshandisa:
ASUS BHODHI (P8B75-M)
VIDEO KADHI 1GB PCIE XFX RADEON HD 5640
Uye zvakandinakira, ndinonyatsoda kutamba ne dolphin uye pcsx2 uye mumitambo ingangoita yese, zvese pa Wii, gamecube inomhanya ingangoita 100%, chete avo vari play2 vane nguva yakaoma, zvikasadaro kubatana kunomhanya kwazvo, kunyangwe zvisiri ini shandisa zvakanyanya sezvo ini ndichida echinyakare maitiro uye kunyangwe chiri chechokwadi chisingashande semumawindo panguva ino inosangana nezvandinoda, seyekupedzisira tsananguro yandinoshandisa ubuntu 13.04 uye hazvisi zvekuti ndiri fan of ubuntu asi ubuntu haisati yakundikana senge linux mint, asi munhu wese munhu wese, Kwaziso
Uye iyo mitambo yemhepo? kusiiwa 4 akafa2, zvakakomba sam bfe3? dota 2? nezvimwewo
Zvakanaka, chokwadi ndechekuti ini handina kuzvipa iro basa rekuzviisa kuburikidza nehutsi nekuti ini ndine muganho wekurodha uye yakawanda yemitambo yaunotaura inorema kupfuura magigiti mashanu, zvinotora nguva yakareba kungotora tf5 semuenzaniso , ipapo kusvikira ndawana chiratidzo chiri nani ini kupfuura, Cheers
Gadzira boka rekubatsira-wega, ATI, kana asiri iwo AMD / ATI, kuti vatenge AMD / ATI ini handizive kana vari masochist kana chii.
Yakapusa kwazvo nekuti paunoenda kunotamba pamawindows uye enzanisa yako ati ne nvidia yemutengo mumwe chete .., nvidia anogara achirasikirwa
Chinhu chinoshamisa sei, ini ndinomhanya LMDE nesinamoni uye C-50 APU uye ini handitaure matambudziko mune iyo flash sezvataurwa pamusoro apa. Ini handinzwisise kuti zvinogona sei kuitika kuvanhu. u_u
Sezvo ini ndatenga mini lap neamd e-300 mbiri mbiri pa1.1ghz ndakanyadziswa zvikuru neamd. Iyo Laptop yaive yakanaka kwazvo, iyo keyboard, iyo skrini, iwo mavara, nezvimwe ... zvisinei, processor yacho yainonoka uye yaipisa zvakanyanya kunyangwe mumawindo ... muUbuntu yakatsamwa (kwete sezviri pachena pachena). Iye zvino ini ndine chizvarwa chekutanga intel core i3 (380m) uye Ubuntu 13.04 irikuita mushe pamwe neUbatana.
Mhere kana iwe uchinzwa kuda ...
Iyo Xorg-Edgers Catalysts yakandishandira pane HP Envy M6 (APU A10-4600M), kunyangwe ini ndichikuudza kuti dai yaive tsanga yavo yakanaka pamuswe kuita kuti ive funkar, kunyanya iwo maCatalysts akaunzwa naKubuntu "nekutadza "12.10 Havana Kushanda NEXORG 1.13 PUÑETERO !!! Mushure mehusiku hwekuzvara, ndakatokwanisa kutamba kuburikidza neWine ... (ini handisati ndaedza L4D2 uye Kerbal Space Chirongwa mune yechizvarwa). Zvakadaro, ini handishandise Linux zvakanyanya pamakumbo aya, nekuda kweiyo remix yandinoisa pamwechete (Ubuntu 12.10 kusvika 13.04 ine KDE uye Kubatana ... havawirirane uye ndine husimbe hwekugadzirisa hunk yese 😛)
Zvino zvandinoronga kugadzira Winbugs 8 kusvetukira kune yangu «Velikaya Slava» (sekudanwa kwangu pamakumbo), ngatione kuti zvinofamba sei ... Tichiziva kuti vakapotsa vaburitsa Kubuntu 12.04.3 (uye AMD inotsigira 12.04.2 na13.04, izvo zvandine chokwadi chekuti ndichagara kwechinguva), zvichave zvinonakidza kuenzanisa mashandiro pakati peiyo naFedora 19 neCatalyst 13.8 ... Ndinovimba vanonyora uye ini handiwane "iyo skrini yakatyorwa (et) kusvika pakufa. "
Kune rimwe divi: Mahara Dhiraivha + APU = isa machende muchoto. Ndinovimba vanokwanisa kunatsiridza izvo zvinhu munguva pfupi, nekuti ndinoda AMD yakawanda pamutengo wayo / mutengo webhenefiti.
Dambudziko rauinaro ndiUbuntu, kwete iyo micro kana madhiraivha kana kadhi remifananidzo. Ndine muchina wekare, une AMD Sempron 3400+, 2 GB ye RAM, uye 21 'LCD tarisiro yandinogona kuona mabhaisikopo, terevhizheni, chero vhidhiyo, kunyangwe yakazara skrini.
Iyo kadhi yemifananidzo ndeyebako-zera Nvidia Geoforce (256K), uye ini handirishandise pamwe nevatyairi vezvivakwa asi nevakasununguka vanouya nehurongwa (Nouveau).
Iyo sisitimu ndeyeLinux Mint Debian Edition (LMDE), iyo inouya nekernel 3.2.0.4.
Nezvo zvinoenda zvakakwana. Handizive mitambo, nekuti ini handishandise; asi nevhidhiyo, hapana dambudziko. Ndinovimba izvi zvinogona kukubatsira. Zvido.
Dambudziko nderekuti ... ivo havasi kutaura nezve processor ... iri nezve maAPU. Ndine Athlon 64 uye Phenom X4 iyo yakamhanya linux sesirika ... dambudziko nderekuti kana uine AMD vhidhiyo kadhi. Ini ndakakwanisa kumhanyisa mitambo senge CoD-MWX (iine X pakati pa1 ne2), Doom 3, yakanakisa yeiyo Soda Yekukurumidza saga uye ikozvino ndaisa Kerbal neL4D2 natively isina kurwa (kubva kune vatyairi) mu «Velikaya Slava »(Yangu HP Shanje M6 APU AMD A10-4600M). Asi kuti ndibude mune iyo "Velikaya Slava" (Kubwinya kukuru muRussia), ndaifanira kuzvara maChinese aine maamburera akazaruka !!!
Ndakave nematambudziko akafanana uye akanakisa andakawana anga ari nemaRPM masisitimu, majee eDeb pakutamba vhidhiyo nemaRPMs zvakare, asi dambudziko ishoma asi ndakakwanisa kurarama nazvo, imwe sarudzo ndeye bhutsu mbiri ne windows. ini, ndakazendamira kuPCLinux uye mumakomputa akasimba ane PCLinux FullMonty hongu kune mamwe akati wandei ikoko iwe une Fedora, Opensuse, nezvimwe. Dambudziko harisi chete AMD, dambudziko rakaonekwa kekutanga neakare Intel makomputa. ine vhidhiyo inosanganisirwa makore angangoita mana apfuura uye kuyedzwa ingangoita gumi masisitimu kubva kubuntu…. kunyangwe crunchbang uye mbwanana, ini handisati ndamboedza BSD masisitimu, kana paine munhu ane ruzivo neBSD + AMD ndapota taura ... kwaziso kune vese ...
Reka kushandisa linux .... iwe unoda kuomesa hupenyu hwako.
Kunze kwezvaunotaura, izvo zvandisingarambe ichokwadi, iwe unofanirwa kukurumidza kudzokera kuchikoro chepuraimari kuti unodzidza chiSpanish chausina kumbobvira wadzidza pawaifanirwa kuve nacho, eh, mukomana? Akawanda sei mazwi uye kurovera paduramazwi mumitsara mishoma! Mukomana, funga kuti mazana kana zviuru zvevanhu vari kuzokuverenga, iwe unofunga sei kuzviratidza iwe uyo asingagoni kuverenga, murume?
Ndatenda, neako makomendi ini ndinosuka mbichana yangu. 😛 uye chechipiri, ndakakura ndichitaura chiitaly, nekudaro ndinokudzwa sezvandinonyora Spanish. Ala, kurara mwana.
Dambudziko rako nderekuti haushandise debian (ubuntu, kubuntu, mint, nezvimwe .. ese ari debian akavakirwa kwete debian). Zvese zvinoshandiswa, zvinoshanda, plug-ins nemaapplication awakataura ini ndinoshandisa nePhenom II 955 X4 BE + ASUS ATI HD 5670 1 G DDR5 uye zvese zvinoshanda sesirika. Edza debian 7.6 nezvikwata zvemashure uye iwe unogona kushamisika.
Usatende kuti Ati inoshanda mushe muWindows, ndine AMD Athlon 64 3500+ ine 2GB yegondohwe, uye ati X300 pci expression uye mumawindows 7, mhuri yetv iri kuzondinetsa, uye iyo system dzimwe nguva inononoka , muGNU / Linux ini handikuudze chero chinhu, iyo AMD marara chaiwo, iine intel core 2 duo ye macbook yangu zvinhu izvi hazvina kuitika
Kubvisa marara neShred
Calligra 2.7 inowanikwa neshanduko shanduko